Fitsidihana tao Antsiranana : Miainga eny ifotony ny fampandrosoana an'i Madagasikara | Primature
Mahazoarivo, ny 01 febroary 2020 – Nitohy tao Antsiranana ny dian’ny delegasiona izay notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian tany amin’ny tapany Avaratry ny Nosy.
Araka izany dia namory ireo tompon’andrai-panjakana tany an-toerana ny Praiminisitra ary nanamarika raha nanao tatitra momba ny asa vita ny mpitantana ny Faritra, fa tsy mandroso araka ny tokony ho izy ny Faritra nohon’ny fitavozavozàna misy eo amin’ny fandraisana andraikitra. Zavatra telo hoy izy no mahatonga izany, dia ny tsy fahaiza-manaon’ny mpitondra any an-toerana, ny firaisana tsikombakomba amin’ny ratsy, ary ny tsy fahaiza-mitantana sy mitarika. Nandritra ny fifanakalozana dia hentitra ny Lehiben’ny governemanta ny amin’ny tokony hanatrarana ny tanjona ho fampandrosoana ny firenena araka ny vina izay napetraky ny Filohan’ny Repoblika. Tsy tokony hiandrasana ny fanjakana foibe ny fanatanterahana ny vinam-pampandrosoana, hoy izy, fa tokony mandray izay andraikitra sy adidy tandrify azy avy hatrany ny tompon’andraikitra isan’ambaratongany mba ho tanteraka ao anatin’ny fotoana fohy ary tena hipaka amin’ny fiainan’ny vahoaka Malagasy ny asa izay ataon’ny tsirairay. Noraisiny ho ohatra ny tranga-na pesta kisoa afrikana tany Ambilobe ka nanazavany hoe nionona tamin’ny fanaovana tatitra tamin’ny ministera ireo mpitondra tany amin’ny Faritra fa tsy nisy fepetra noraisiny. Araka izany dia nambarany fa mila ny fahavononan’ny rehetra ny fanatanterahana ny politika ankapoben’ny fanjakana, ary izany dia hotanterahina ao anatin’ny fahamendrehana, ny fahaiza-manao, ary lavitry ny kolikoly.
Mbola notsindriany tao Antsiranana ihany koa ny tsy tokony hisian’ny fanararaotana taorian’ny fandalovan’ny andro ratsy teto amin’ny firenena. Nambarany fa maromaro ny fanarenana sy fanatsaràna hotanterahin’ny fitondram-panjakana, toy ny fanatsaràna ny Jirama, ny fametrahana orinasa mpamokatra fanafody eto Madagasikara, ny fonja vaovao isaky ny renivohi-paritany, ny “Centre d’Urgence” eny anivon’ny distrika, ny ivon-toerana fanadiovana rà ho an’ireo marary voa, ny fametrahana “lycée de reference” ho an’ny zanaka Malagasy, izay efa manomboka ankehitriny, ny handraisana fepetra amin’ireo faritra voaaro, ny hamitàna kianja manara-penitra ao Antsiranana sy ny fanatsaràna ny fotodrafitrasa ara-panatanjahan-tena.
Nandritra izao fitsidihana izao ihany koa no nandraisan’ny Praiminisitra ilay sambo nitondra fanampiana avy amin’ny governemanta Indianina entina hanampiana ireo tra-boina vokatry ny fandalovan’ny andro ratsy, tao amin’ny seranan-tsambon’Antsiranana. Fanampiana izay natolotry ny Ambasadaoron’i Inde, Andriamatoa Abhay Kumar, ary nahitana vary, fanafody, ronono, lamba firakotra sy fitafy, ary kojakoja isan-karazany ilaina amin’ny fiainana andavanandro.
Santionany ihany hoy Andriamatoa Abhay Kumar ireo tonga ireo fa mbola misy ny fanampiana afaka entin’i Inde. Miankina amin’ny tena filan’i Madagasikara izany, hoy izy, indrindra fa ireo faritra izay tena voa mafy noho ny fandalovan’ny andro ratsy teo.
Ny Praiminisitra kosa dia mbola nanamafy hatrany fa ho tsinjaraina araka ny tokony ho izy ireo fanampiana ireo ary nankasitraka ny fanomezan-tanana nataon’ny governemanta Indianina.
Ankoatra izay dia mandray ireo olona rehetra mila fitsaboana ny “équipe médicale” ao amin’ity sambo ity, mandram-pialany eo amin’ny seranana.
← Fitsidihana ny faritra avaratr’i Madagasikara
Fitsidihana ny seranam-piaramanidin’Ivato →